Ziziphi iimpawu zamagugu ezixabisekileyo nezisisigxina? Ixabiso okanye ufikeleleke?
Gemstones ezixabisekileyo nezisisigxina
Ngokwenzululwazi yezemvelo, kukho izigaba ezimbini zamatye: amatye anqabileyo kunye namatye anqabileyo.
Kukho kuphela i-4 ngamatye anqabileyo
I-4 ngamatye anqabileyo yidayim, i-ruby, isafire, ne-emerald.
Mayelana neentsapho ze-70 kunye neentlobo ze-500 zihlelwa njengamagugu
Ukungafani kwamagqabha e-betwin kunye namanye amatye kukuba ayetshenziselwa ukwenza ubucwebe ngelixa ezinye izitye zingekho.
Ngokuchasene nento eninzi yabantu inkolelo, esinye isizathu esenza ukuba amatye ahlelwe njengento eyigugu yimbali. Ewe, malunga ne-500 kwiminyaka edlulileyo, abanamandla kweli hlabathi banomdla kuphela kule matye amane. Ngelo xesha, amanye amatye ayengenanto. Ngoko ke, sinokucinga ukuba kwakuyiyitye e-festile, ngelo xesha kwaye bahlala, kude kube namhlanje, amatye amaninzi axabiswa ngamandla.
Yayimela isimboli yobutyebi namandla. Kwaye ngenxa yezizathu ezifanayo ukuba kusekho, okwangoku, ngamatye axabisa kakhulu.
Ngoko akukho ncazelo yenzululwazi. Kungenxa yokuba umthetho weemarike, okanye umthetho wokubonelela kunye nokufuna.
Uya kuva malunga neopals "ezixabisekileyo", iitanzanites, ii-alexandrites kunye namanye amatye. Oku akulunganga kwaphela. Kodwa yindawo yokuthengisa esetyenziswa ngabathengisi begem ukutsala abathengi, kunye nokongeza ixabiso kwilitye, ngethemba lokufumana ixabiso elingcono lokuthengisa.
Uninzi lwabathengisi begem abazizo igemologists kwaye bahlala becinga ukuba bayazi ukuba bathetha ngantoni, xa besazi kuphela ixabiso labo lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa abanethemba lokufumana. Uninzi lwazo alwazi umohluko phakathi kwelitye lendalo kunye nelitye lokwenziwa. Kuyamangalisa, akunjalo?
Kungenxa yoko le nto kukho iilabhoratri ze-gemological eziqinisekisa amatye. Oku kunyusa iindleko zomthengisi, kodwa kuququzelela ukuthengisa.
Ixabiso elixabisekileyo kunye nelitye elixabisekileyo
Enye into engafanelekanga kukuba iigemstones ezixabisekileyo zendalo zibiza kakhulu. Kwinyani, oku akusoloko kuyinyaniso. Enyanisweni, idayimane, i-ruby, isafire okanye i-emerald inokuba yindleko enemali kakhulu. Kuxhomekeke kumgangatho wabo. Nangona u mgangatho ophakamileyo wamatye anqabileyo unokuba nexabiso elingaphezulu kwezi zinto ezintle.
Isishwankathelo, amatye anqwenelekayo kunye namanqabileyo axabisekileyo angabiza kakhulu okanye afikeleleke kakhulu.
Ukuba unomdla kulo mxholo, ufuna ukuhamba kwi-theory ukuzisebenzisa, sinikeza izifundo zegemology.